Maka Almukarrama oo laga furayo hotelka ugu ballaaran caalamka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maka Almukarrama oo laga furayo hotelka ugu ballaaran caalamka
Mareeg.com: Magaalada barakeysan ee Maka Almukarrama waxaa ka socda dhismaha hotelka ugu weyn caalamka, kaasoo laga dhisayo meel dhanka koonfureed kaga beegan Al-xaram Al-maki, sidaas waxaa qoray Al-jazeera iyo The Guardian.
Maka Al-mukarrama ayaa u diyaar garoobeysa furitaanka hotelkaas ballaaran, iyadoo qorshaha lagu dhisay uu qeyb ka yahay mashaariic ay dowladda Sacuudigu ugu talagashay in kor loogu qaado heerka Maka ku qaabil karto dadka malaayiinta ah ee xajka iyo xumrada u taga sanad kasta.
Hotelkaan oo ka kooban 12 Towers oo isku garab yaalla ayaa wuxuu yeelan doonaa 10 kun oo qol iyo 70 maqaayadooda. Sidoo kale wuxuu leeyahay goobo ay ku degaan diyaaradaha qumaatiga u kaca (Helicopters) iyo suuqyo waaweyn oo laga dukaameysto.
Waxaa hotelka ku baxaya lacag dhan 3.5 Bilyan dollar, waxaana lagu wadaa in xarriga laga jaro sanadka 2017, iyadoo loogu talgalay inuu buuxiyo baahiyaha deegaan iyo nololeed ee ay qabaan dadka Muslimiinta ee Xajka iyo Cumarada sanad kasta u taga halkaas.
Wasaaradda Maaliyadda Sacuudi Carabiya ayaa bixisay qarashka lagu maalgeliyey hotelkaan ballaraan, wuxuuna kusoo beegmayaa xilli Sacuudigu doonayo inuu sii ballaariyo dhismaha Xaramka.
Xaramka oo ay haatan ku dukan karaan 3 Milayn oo qof ayaa la doonayaa in la gaarsiiyo iney markiib ku dukan karaan 7 Milyan oo ruux sanadka 2040-ka, waxaana ku baxaya adduun dhan 60 Bilyan oo dollar.
Magaalada Maka Al-mukarrama ayaa sanad kasta qaabisha ilaa 2 Milayan xaaji iyo 20 Milyan oo cumreysanaya, taasoo ka dhigan inuu soo geli karo dakhli dhan 9 bilyan oo dollarka Mareykanka ah.
Dagaalyahan Soomaaliya ah oo Mareykanku ku dilay Ciraaq
Sawirro: Shirkad Turki ah oo baareysa tayada badeecada Soomaaliya